फेरि चिप्लियो को बन्छ करोडपति – MySansar
Posted on June 3, 2019 June 3, 2019 by Salokya
हु वान्टस टु बी अ मिलिनियरको नेपाली फ्रेन्चाइज शो को बन्छ करोडपतिको आइतबार शनिबारको शोमा पाहुनाहरुलाई बोलाइएको थियो। सन्दीप क्षेत्री र कार्यक्रमका प्रायोजक सिभिल बैँकका सिइओ गोविन्द गुरुङ। शोमा पाहुना बोलाउनु नयाँ कुरा हैन। बाहिरतिर पनि बोलाइन्छ। तर बाहिरका शोहरुमा सेलिब्रिटीहरु बोलाइन्छ। हाम्रोमा भने प्रायोजक एउटा बैँकका सिइओलाई बोलाएछन्।
त्योसम्म त ठीकै भनेर मान्न सकिएला। तर यहाँ कुरा आयो प्रश्नको। प्रश्नमा फेरि एक पटक को बन्छ करोडपति चिप्लिएको छ।
यसमा who has the right to declare insurgency period in Nepal भनिएछ। खासमा संकटकालको अङ्ग्रेजी अनुवाद emergency हो। शोका प्रोड्युसरको दिमाग भने insurgency मा पुगेछ। यसको अर्थ त an active revolt or uprising हुन आउँछ। जस्तै नेपालमा भएको माओवादी सशस्त्र युद्धलाई insurgency भनिन्छ। दाङमा २०५८ साल मंसिरमा माओवादीले सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरेपछि तत्कालीन सरकारले लगाएकोलाई भने संकटकाल अर्थात् emergency भनिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज शोमा प्रश्न नै गलत हुनु त अलि सुहाएन नि। अलि मेहनत गर्नुपर्‍यो प्रोड्युसरहरुले।
7 thoughts on “फेरि चिप्लियो को बन्छ करोडपति”
Dherai rakam jitla bhanne dar le question nai arabi bhasa ma student lai k bhanchha bhanera sodhya thiyo ek choti.kasto samanya gyan question ho yo.baru rajesh hamal biha garnu purba madhu sang kati patak dating gayeka thiye bhanera sodhe bhayo ni.option ma 1 choti2choti5choti 10 choti.
Spelling of Defense Minister is also wrong.
i totally ignore this stupid Indian style game…lyang lyang nai badi….British style is so time saving and straight…Rajesh Hamal needs to go back to school too
“चिप्लियो को बन्छ करोडपति” मात्र होइन, त्यसको समाचार लेख्ने mysansar.com पनि चिप्लियो।
गोविन्द गुरुङ र सन्दिप क्षेत्री लाई बोलाएको कार्यक्रम प्रसारण भएको आईतवार होइन, शनिबार ( June १ तारिखमा ) हो ।
आफूले युट्युबमा आइतबार हेरेपछि कार्यक्रम नै आइतबार प्रसारण भएको ठान्ने म साँच्चिकै चिप्लेकै हुँ। सच्याइदिनुभएकोमा धन्यवाद।
Babu D.Magar says:
प्रश्न हरुको मात्र कुरा नगरौ यहा ! अरुदेश्को kbc को शो म नर्मल जनतालाई पनि लगेको पाइन्छ तर हाम्रो देश्मा चाहिँ vip n celebraty हरुको लागि मात्र रहेछ । बिज्ञापन मा चाहिँ सर्वसाधारण ले पनि सहभागिहुन सक्छ भनेर चाहिँ कैयौ सर्वसधारन जनताले पनि kbc ko sms no मा sms गरे। आफू पनि परिहल्छु कि भनेर तर या चाइ ठिक उल्तो भ्क्ये ज्स्तो लाग्यो। जुन sms पथायेको sms छ त्यो sms le पनि kbc laai रहत मिलेको छ। तेसैले यो शो चै जुन व्यक्ति पहिल्यै करोदपती छन तिनिन्हरुको लागि मात्र चालू गरेको जस्तो chh…. यो देशमा चाइ कुनै पनिठाउमा सोझा अनि गरिब जन्ताको लागि ठाउँ छैन भन्ने कुर बुझिन्छ …!
त्यहि त। मैले त हिजो हेर्दाहेर्दै स्क्रिनसट लिएर फेसबुकमा राखेको थिएँ। Emergency र Insurgency छुट्याउन ध्यान नदिॅदा राष्ट्रियस्तरको टेलिभिजनमा यस्ता गल्ती लाजमर्दो हो।